प्रहरीले सक्यो मुना कार्की ह’त्याको अनुसन्धान: यस कारण देखिएकोरहेछ बिजयको अ’न्डरवेयरमा वि’र्य, यस्तो आयो नि’ष्कर्ष ! – PathivaraOnline
Home > समाज > प्रहरीले सक्यो मुना कार्की ह’त्याको अनुसन्धान: यस कारण देखिएकोरहेछ बिजयको अ’न्डरवेयरमा वि’र्य, यस्तो आयो नि’ष्कर्ष !
admin February 24, 2020 समाज	0
काठमाडौँ। ललितपुरको सानेपा ह’त्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान स’किएको ज’नाएको छ। घ’टनाको अनुसन्धान गरिरहेको ललितपुर प्रहरी परिसर घ’रेलु का’मदार विजय चौधरीले पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुनाको ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या गरेको नि’ष्कर्षमा पुगेको छ। ‘कामदारबाटै ह’त्या भएको स्प’ष्ट छ। का’मदारले पनि आ’त्मह’त्या गरिसकेकाले अब यसमा थप अनुसन्धानको आ’वश्यकता देखिँदैन’, ललितपुर प्रहरीले स्रोतले भने।
प्रहरीले भ’वितव्य ज्या’नमा अनुसन्धान प्र’तिवेदन सरकारी वकिललाई बु’झाउने त’यारी गरेको छ। गत माघ २७ गते बिहान पूर्व सचिव कार्कीको घरमा मुनाको श’व कि’चनमा र घ’रेलु का’मदार झु’न्डिरहेको अवस्थामा फे’ला भएका थिए। बिहानै घरबाट नि’स्किएका अर्जुनले बिहान पशुपति द’र्शन गरेर ११ बजेर २० मिनेटमा घर आइपुग्दा मुना र’क्ताम्य अवस्थामा भु’ईँमा ल’डिरहेकी थिइन् भने विजय झु’न्डिएको अवस्थामा थिए।
घ’टनापछि मृ’तक दुवैका आ’फन्तले नि’ष्पक्ष छा’नबिनको मा’ग गर्दै प्रहरीमा जा’हेरी दिएका थिए। प्रहरीले घरमा ज’डान भएको सि’सिटिभी फु’टेजलाई के’लाउँदा विजयले कि’चनमा काम गरिरहेकी मुनालाई प’छाडिबाट घाँ’टी च्या’पेर ल’डाई हि’र्काएको देखिएको थियो। १० बजेर १० मिनेटमा विजयले प’हिलोपटक मुनालाई आ’क्रमण गरेकामा विजय ११ बजेर ८ मिनेटसम्म घरभित्रै य’ताउती गरिरहेको सि’सिटिभी फु’टेजमा देखिएको थियो। ‘नि’कै आ’क्रोशित भएर विजयले मुनालाई हि’र्काएको देखिन्छ।
तर ह’त्या किन गरे भन्नेबारे अनुसन्धानबाट केही खु’ल्न सकेन’, अनुसन्धानमा ख’टिएका प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। मृ’तक मुनाका दुई छोरी र एक छोरा छन्। दुवै छोरी विदेशमा रहेकाले त्यस घरमा अर्जुन, मुना, ८ वर्षीय छोरा र विजय मात्र बस्दै आएका थिए। दाङ घर भएका विजय ६/७ वर्षयता कार्कीको घरमा बस्दै आएका थिए, घरेलु का’मदारका रुपमा। घ’टनापछि विजयको अ’न्डरवेयरमा वि’र्य र र’गत भेटिएको तथा मुनालाई म’हिनावारीसमेत भएको भन्दै ज’बर्जस्ती क’रणीको प्र’यास भएको हुन सक्ने प्रा’रम्भिक आ’शंका गरिएपनि त्यस्तो केही नभएको प्रहरीको नि’ष्कर्ष छ।
‘ज’बर्जस्ती क’रणी भएको भन्ने ह’ल्ला ग’लत हो। आ’त्मह’त्यामा वि’र्य निस्कनु स्व’भाविक हुन्छ। मुनालाई ढा’लेपछि विजयको शरिरमा र’गत देखिन्छ जुन अ’न्डरवेयरमा पनि ला’गेको हुन सक्छ। मुनाको मा’सिक श्रा’व च’लिरहेको साँ’चो हो। उनले प्या’ड ल’गाएको देखिन्छ’, ललितपुर प्रहरी स्रोतले भन्यो। प्रहरीले विजयको मोबाइल जाँ’च भएपनि त्यसमा केही न’भेटिएको जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा छद्म नामबाट प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारहरुमाथि आ’क्रामक टिप्पणी